Ukufunda + Ukusebenza - Hamba! SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > Izifundo zethu > Ukufunda + Ukusebenza
Ukufunda + ukusebenza (imfundo yesikhathi esithile)
Ngena ngemvume emfundweni yesikhathi esithile
futhi ngokushesha uqale imfundo yakho.
Ungangena ekufundeni nasekusebenzeni nganoma yisiphi isikhathi phakathi nonyaka wesikole.
Modular uhlelo can ezinhlelweni eziningi iziqu ngasiphi isikhathi sonyaka esikoleni.
Ukufunda nokusebenza e-DBSO Antwerp kuyindlela funda kabili.
Ukufunda + Ukusebenza
Uhamba ngezinsuku ezimbili esikoleni futhi usebenza izinsuku ezintathu. Ngakho-ke usebenza izinsuku ezinhlanu ngesonto.
Ufunda uchwepheshe futhi ungathola futhi idiploma.
Izifundo ziyi-modular. Lokhu kusho ukuthi uzoba isazi esikhwameni sakho ngesinyathelo. Ngemuva kwesinyathelo ngasinye, uthola ubufakazi bokuthi usukwazi yini kakade.
Esikoleni uzoqondiswa othisha bakho. Futhi unomeluleki womsebenzi ofana naye
Ufunda ubuchwepheshe kokubili esikoleni nasemsebenzini.
Uma uthola olunye ulwazi olunolwazi, uthola isitifiketi. Uma unesitifiketi esanele sokubamba iqhaza, uzothola isitifiketi sekhono lobuchwepheshe.
Izifundo eziningi zihlala iminyaka emibili kuya kwezine.
Wonke umuntu osemusha ufunda ngesisindo sakhe. Ngakho-ke, isikhathi sokuqeqesha kwakho asikwenziwe kusengaphambili. Konke okufundayo emsebenzini wakho kubalulekile esikoleni.
Uzothola intuthuko yakho kanye nomfundisi wakho njalo ngesonto ukuze wazi ukuthi yini okufanele ufunde.
Thola idiploma yakho
Ungathola idiploma yezemfundo yesibili esikhungweni sethu.
Ulandela izihloko ezijwayelekile usuku olulodwa ngesonto. Lolu hlelo lwesifundo lufana nalokhu lwe-BSO emfundweni yesikhathi esigcwele.
Siphinde sihlele lezi zifundo ngokuzenzekelayo. Okusho ukuthi, wena uphumelele ngokushesha uma ufeze konke. Ungaphumelela nganoma yisiphi isikhathi phakathi nonyaka wesikole.
Wonke umuntu osemusha ufunda ngezinga lakhe futhi ulandela inkambo ngayinye. Ngakho awukwazi "ukuhlala".
Uma ubhalisa esikhungweni sethu bese ubhala phansi ukuhlolwa kokungena. Ngalesi sivivinyo sokusetha, ubonisa ukuthi ungenzani. Konke ongakwenza, akufanele ufunde kabanzi. Ngakho-ke ungakwazi ukuthola ukukhululwa kwalolu daba. Isonto ngalinye ungabona ukuthi yini okudingayo ukuze ufunde nothisha wakho.
Ukuqeqeshwa kokufunda + Ukusebenza
Ukuphatha & IT
NEW - Umkhiqizi wokukhiqiza Metal - CNC
INGXENYE-AMAKHOSI // BSO // ICAMPUS RUGGEVELD
Ujwayele ukwenza umsebenzi wensimbi futhi ulungiselela ukwenza umsebenzi osebenzayo ngensimbi. Kugxilwe ekucutshungweni kwensimbi ye-CNC.
INGXENYE-IZIKHATHI // DBSO // IKAMPUS RUGGEVELD
Ufunda ukuhlela imisebenzi yezemidlalo nokuqondisa abantu abasha emsebenzini womakhelwane kanye nezinhlangano zendawo. Uzofunda mayelana nezinto zokwakha kanye nemishini yezemidlalo futhi ufunde ukugqugquzela abantu abasha ukuba basebenzise. Uthola ulwazi olusebenzayo mayelana nokufudumala, ukudla okunomsoco, i-anatomy, i-group dynamics, kanye nosizo lokuqala. Ufunda ngokulwa nemidlalo yebhola. Umphathi wezemidlalo emfundweni yesikhashana yilabo kuphela ukuqeqeshwa kwezemidlalo ezingeni le-BSO.
Uzobe unomthwalo wemfanelo wokuthola, ukuphatha ifoni, ukuphatha iposi, ukwenza imisebenzi yokuphatha, ukulandela ithrekhi yeklasi, ukwenza imisebenzi yokusekela emihlanganweni, nokwenza imisebenzi yehhovisi elisekelayo.
Ufunda ukuthi angawakha kanjani amakhompyutha futhi awenze alungele ukusetshenziswa. Ufunda ukufaka la makhompiyutha nezinto ezisondelene nazo (noma ngabe zisebenza endaweni yenethiwekhi) futhi uzilungise. Ngokungeziwe kulwazi lwezobuchwepheshe mayelana ne-software ne-hardware, uthola namakhono wokuthengisa nolwazi oluyisisekelo ngomsebenzi wokufaka kagesi.
Ngokuyinhloko uzibandakanya ngaphandle kwemoto. Ufunda ukulungisa ukulimala okulula emzimbeni wezimoto. Ufunda ukuthi usebenza kanjani ngamathuluzi ahlukene, susa futhi uhlakaze futhi uhlakaze izingxenye zemoto, i-weld ne-solder, uthephe kanye nesihlabathi. Ufunda ukwakha imibala efanele bese uphefa ngokucophelela umzimba womzimba. Uzofunda futhi mayelana ne-chassis, izinjini, ukuphepha komsebenzi kanye nokugesi kagesi.
Imisebenzi - ifomu - umsebenzi wokhonkolo
Ufunda konke ngokufaka ukushisa okuphakathi nokupaka amapayipi. Ufunda konke mayelana namapayipi. Ngokufunda okubili, sikulungiselela umsebenzi enkampanini yokushisa emaphakathi noma nge-plumber. Ngakho-ke, le khosi igcwalisa umsebenzi we-bottleneck.
Lolu hlelo lufuna ukukwenza isisebenzi sokwakha / ikhono lwakwazi. Konke ukufunda kukufundisa ukuthi uqonde futhi usebenzise imisebenzi yakho yokwakha elula ngenkathi ulandela imiyalelo yokuphepha.
Ufunda ukusetha, ukusebenza nokuhlanza imishini ehlukahlukene yezinkuni, futhi ufunda ukusebenza ngamathuluzi esandla. Wakha amakhabhinethi, amadeski kanye namadesksi ahlukene ngaphakathi: amakhishi, izindlu zokugeza, izitolo zokuhlobisa, izihambi, amahhovisi kanye namabhentshi, ukuhlobisa kwangaphakathi.
Usizo (umsizi) usebenza ekamelweni. Sifundisa indlela yokukhonza amakhasimende akho, indlela yokuhlela itafula nendlela yokukhokha emva kokudla. Ufunda nokuthi ungayisebenzisa kanjani iwayini. Usebenza esitolo sokudlela noma esitokisini.
Funda konke ngokupheka; ukusika imifino, ukulungisa amasoso nokuhlanganisa imenyu. Ukuqeqeshwa kufaka kokubili ukupheka nokupheka okushisayo. Uzofunda ukuthi ungalungisa kanjani ama-dessert. Uyazi ukuthi nathi sikufundisa indlela yokupheka i-halal, imifino kanye ne-vegan?
I-Forklift Finyelela Emalini
Ufunda ukulayisha, ukuqaqa nokugcina izinto ngokuhlelekile endaweni yokugcina izinto ngosizo lwefoloko. Ngaphezu kwalokho, ufunda ukulungiselela ama-oda ngohlelo lwekhompyutha ngokulungiselela izimpahla. Kodwa-ke, ukusebenza ngokomzimba kuhlala kudingekile esitolo. Umsebenzi we-Warehouse uguquguquka ngezindlela eziningi futhi kudinga futhi ukuthi ukwazi ukusebenza kahle nozakwabo.
Ufunda ukwamukela izimpahla ngendlela efanele, ukulayisha, ukukhipha futhi ukukhipha. Uzofunda ukuhlunga, hlola, ukulungiselela ukuthumela, ukuhambisa nokugcina. Ukuze wenze lokhu uzothola ukusebenzisa amathuluzi afana ne-transpallet noma idayisi namathuluzi wokufaka izinto njenge-pallet, ibhokisi, inja, .... Ufunda futhi ukuthi ungene kanjani ngokuphepha nangokusebenza kahle nokuthi ungabala kanjani, uskena futhi ubhalise izimpahla. Ekugcineni, uzofunda ukuhlola nokugcwalisa imibhalo ehambelanayo.
Ukugcizelelwa kule nkambo kusemsebenzini njengomthengisi - umthengisi onesizinda sobuchwepheshe. Ufunda ukubhekana namakhasimende. Uqeqesha kumthengisi wemfundo yesikhathi esigcwele ukuthi ungakhulumisana kanjani kahle. Uzofunda amaphrezentheshini namasu okuthengisa futhi uthole ulwazi lokuhweba nolwazi lomkhiqizo.
Ukugcizelelwa kule nkambo kusemsebenzini njengomthengisi - umthengisi esitolo, esitolo sokuthenga noma esitolo. Ufunda ukusingatha amakhasimende. Usebenza ngokuxhumana okuhle. Uzofunda amaphrezentheshini namasu okuthengisa. Uthola ukuqonda kokuhweba nolwazi lomkhiqizo.
Ufunda ukugoqa ngokuzimela nangokwenene ngesiteshi se-welding for welding nge electrode ehlanganisiwe / i-MIG-MAG ne-TIG. Ujwayela ngomshini wokuzenzekelayo osebenza emashini e-aluminium noma (okungenasici) bese ufunda ama-welds ahlukene. Ufunda ukusebenzisa amathuluzi ngokuqinile ngokwemiyalo yomkhiqizi.
Umqondisi wokunakekela izingane
Ufunda ukusebenza nabantwana, izinsana noma izingane zesikole samabanga aphansi. Usebenza ku-creche noma ungaphakathi kokunakekelwa esikoleni ngaphambi nangesikoleni. Ngezinye izikhathi nawe usebenza esikoleni lapho usekela khona ukufundiswa kwabasenkulisa noma esikoleni samabanga aphansi.
Isibambisi - Isibhwele
Njengomuntu wezinwele ube ochwepheshe ekusikeni, ukuxubha, ukubala futhi ukuvumela futhi ulandele imikhuba yakamuva eduze. Ngaphezu kokunakekelwa kwezinwele, ufunda futhi amasu ayisisekelo esandleni futhi ubheke ukunakekelwa. Ufunda ukusebenza ngokuzimela futhi ngemva kokuphothula iziqu ungase uqale ukusebenza njengombheki ohlangenwe nakho.
Izikhungo zokuNakekelwa kwezeMpilo zoHlelo
Isisebenzi sokusebenza emakhaya asebekhulile kanye nezikhungo zokunakekelwa kubhekene nemisebenzi yokusebenza. Ufunda ekuqeqesheni indlela yokuhlanza amakamelo, uletha ukudla okuzungezile futhi uhamba nabantu asebekhulile emisebenzini. Abasebenzi bezinkampani abenzi lutho lokunakekela.
Umnakekeli ezindlini zokuhlala nezikhungo zokunakekelwa wenza imisebenzi elula yokunakekela. Usiza asebekhulile futhi ubaqondisa. Uma usuqedile le nkambo, ungaqhubeka ngokukhethekile njengomsebenzi wezempilo.
Uchwepheshe wezezempilo angasebenza ngokuzimela endlini yokuphumula noma ekhaya lomhlalaphansi. Uma usuqedile le nkambo uzothola i-visa evela ochwepheshe bezempilo. Ube nethuba eliphezulu lomsebenzi.
Imfundo yesikhathi esithile ekusebenzeni
IMFUNDO YEMPHAKATHI: UKUFANELELA KWEZINTO
IMFUNDO YEMPHAKATHI .... Ngaphezu kwesikhathi esigcwele!
Uhlanganisa ukufunda ngomsebenzi. Ukufunda okubili kumile Imfundo yesikhathi esithile phakathi. Uthola usuku olulodwa lwemfundo jikelele kanye nosuku olulodwa lwemfundo yobuchwepheshe esikoleni. Uzofunda ngomsebenzi womsebenzi izinsuku ezintathu. Ngakho usebenza isikhathi esigcwele!
Ngalolu hlelo ungakwazi ukulandela izifundo ezahlukene ngaphakathi kwe-Industry, STEM, Sport, Logistics, Catering and Care. Ngaphandle kokuqeqesha emfundweni yesikhathi esithile, siphinde sinikeze ukunakekelwa okuyisisekelo komuntu wonke. Sibheka ngalokhu ngokwehlukile umfundi ngamunye. Ngale ndlela uthola ukwesekwa ngabanye lapho ungazithuthukisa khona ngesivinini sakho.
Le nqubo kungenzeka kusuka ku-15 kuya ku-25 unyaka. Kumelwe ukuba ugcwalise okungenani iminyaka emibili yemfundo yesikhathi esigcwele.
Imfundo yesikhathi esithile iseduze kakhulu ne Imakethe yezabasebenzi. Silungiselela abantu abasha ukuba benze umsebenzi onomphela kanye nokuthola imali ephephile.
I-ANTWERP YEMFUNDO EPHAKATHI
Amaphrofayela we-Spectrumschool njengomhlinzeki wekhwalithi Imfundo yesikhathi esithile e-Antwerp. Sibeka ukubaluleka okukhulu ekuzibandakanyeni kwesikhathi esigcwele. Lokhu kusho ukuthi silwela wonke umuntu ukuba aqalise; Okukhethayo emsebenzini ojwayelekile futhi okhokhelwayo. Esifundweni sesikhathi esithile sakwa-Antwerp, siyazihlukanisa ngoba sithola njalo izinga eliphezulu lokuqashwa. Yilokho okufanele abafundi bethu kanye nabasebenza nabo.
Sihlela izifundo zethu zesikhathi semfundo eDeurne-Antwerp. Abaqashi esisebenza nabo atholakala kulo lonke isifundazwe sase-Antwerp. Sihlala sikhumbula uma ufuna umsebenzi lapho uhlala khona ukuze kungadingeki wenze izinyathelo ezingadingekile. Imfundo yesikhathi esithile iqinile futhi ijikeleze i-Antwerp. Lokho kunengqondo. E-Antwerp unomsebenzi omningi lapho abafundi bezemfundo yesikhathi esithile bangaba khona kahle. Ngenxa yokuthi kunabantu abaningi abahlala futhi basebenza e-Antwerp, nawe unemisebenzi eminingi yesibili efana nokuhlala kwamakhaya, ama-creches, ... I-Antwerp ayiyona into edolobheni lezomnotho laseFlanders futhi lapho Imfundo yesikhathi esithile e-Antwerp Vele uzuze kulo.
IZINDABA NGEMFUNDO EPHAKATHI
Ungabandakanyeka ezinhlotsheni zemisebenzi e-Spectrum School. Uma ungazi ukuthi kusho ukuthini umsebenzi, khona-ke iphrojekthi yokuqala noma ibhuloho ngumsebenzi ofanelekayo emfundweni yesikhathi esithile. Uma nje ubonisa ukuthi uyazi ukuthi umsebenzi ungubani, sizobheka umsebenzi ovamile ndawonye.
Umsebenzi ovamile usebenza nomqashi wangempela futhi ukhokhe ngokugcwele. Izinkontileka zakamuva zilungele kakhulu ukuthi abazali bakho bahlale bekhokhiswa intela nokuthi ungakwazi ukugcina ingane yakho imali.
Imfundo yesikhathi esithile noma ukufunda okubili kuholela emsebenzini ohlala njalo
Cishe zonke izinhlelo esizihlelayo zixhunyaniswe nochwepheshe bokuntuleka noma emkhakheni we-bottleneck. Lokhu kusho ukuthi uma usuqedile, uzothola kalula umsebenzi okhokhelwa kahle. Ukuthola umsebenzi akulula neze; kodwa awodwa. Sizokusiza endleleni yakho futhi ngokuvamile ngemva kokuqeqeshwa kwakho emfundweni yesikhathi esithile ungaqhubeka nokusebenza ngenkontileka enomphela emsebenzini wakho.
Sebenzisa bonke abafundi, abantu abasha, othisha nabaphathi Isikole se-Smart. Wonke umuntu osemusha uthola i-akhawunti uma ebhalisiwe. Kuyindlela yokuxhumana ebaluleke kunazo zonke phakathi kwabafundi ne-CDO.
UKUFUNDA KOMSEBENZI yigama elihlukile lemfundo yesikhathi esithile
Kuyavunywa, akutholali lutho olulula. Esikhundleni semfundo yesikhathi esithile, ngezinye izikhathi sikhuluma ngokufunda ukusebenza; kusuka ekufundeni okubili; ukufunda nokusebenza ...
Lawa onke amagama ahlukene emfundweni yesikhathi esithile.
Okubalulekile ukuthi uhlanganisa umsebenzi wakho nokufunda nokuthi ungenza umsebenzi noma ubuciko ngokusebenzisa lokho kuhambisana nemininingwane encane kakhulu.
Ukufunda ukusebenza noma imfundo yesikhashana? I-trajectory enkulu uma ufuna ukwenza okuhle emsebenzini wakho.
ISIFUNDO NGAPHAMBI KWEZIFUNDO EZIFUNDWAYO NEMFUNDO YOKUTHANDANA
I-Spectrumschool ihlela kokubili imfundo yesikhathi esigcwele kanye nokufunda enkambweni emibili. Ku Imfundo yesikhathi esithile Hlanganisa ukufunda kwakho esikoleni nokufunda endaweni yokusebenzela. Uzokhokhwa futhi uma uzosebenza.
Ekufundeni okubili kuwukugcizelela ekufundeni emsebenzini. Ungafunda kabili emfundweni yesibili egcwele kanye nesikhathi sesikhathi sokuhlanganyela. Esikhathini esigcwele awukhokhwa emsebenzini phansi, kodwa ngesikhathi esithile. Ukuze ufunde ngokubili, izimfuneko zokungenwa okunamandla ziyasebenza ekufundiseni isikhathi sesikhathi. Uma ufuna olunye ulwazi mayelana nalezi zindlela ezimbili noma uma ufuna ukwazi kabanzi mayelana nokwahlukana phakathi kokubili izinhlelo, sicela uxhumane nathi. Siyajabula ukukusiza.
> Funda kabanzi mayelana nokufunda okubili
Funda iwebhusayithi yethu ye-Spectrumschool ngolimi lwakho.
Hlola izinguqulo zamazwe ngamazwe zokufunda esikoleni se-spectrum nokusebenza.
Lezi zinguqulo zenziwe yikhompyutha ngakho-ke azihlali zilungile njalo. Noma kunjalo, ukufaneleka kwamatheksthi kuqinisekisiwe.